Amacebo okucoca ulwelo China nonwoven lokucoca ilaphu Factory
Isihluzi se-polyester saziva
Isihluzi senkampani yeRiqi sivelise ipholiyesta yenaliti yokuziva ngathi ikhethiwe i-1-2.5 d yefayibha esemgangathweni ye-polyester, enamandla aphezulu kunye nentambo ephantsi yokuluka ukoluka iscrim eqinisiweyo, ngokusebenzisa ukomeleza i-acupuncture kunye nenkqubo yonyango. Ukongeza kwiimpawu ze-porosity ephezulu, i-permeability elungileyo, i-asidi ukumelana kunye nealkalinity yokumodareyitha yelaphu eliqhelekileyo lokucoca ulwelo, imveliso inokunxiba okuhle kakhulu ukunxiba, kungoko lolona hlobo lusetyenzisiweyo lwezixhobo zokucoca ulwelo.weight ukusuka kwi-350 g / ㎡ ...
Isihluzo seAramid NOMEX saziva
Ifayibha ye-aramid eveliswa ngumvelisi we-aramid fiber ohamba phambili kunye nomgangatho ophambili wamazwe aphesheya wasetyenziselwa ukwenza i-Metas yeqondo lokucoca inaliti enganyangekiyo. Iimpawu Metas lobushushu eliphezulu ukumelana inaliti lokucoca waziva: ukumelana ubushushu obugqwesileyo: inokusebenza ngokuqhubekayo kuma-204 4 ubushushu (ubushushu kwangoko 250 ℃), kwaye iyakwazi ukumelana nokuphindaphinda ama-250 temperature amaqondo obushushu anyukayo. 2. uzinzo olubonakalayo olubonakalayo ...
Inaliti yeglasi yefayibha evakalayo luhlobo lweemveliso ezinobushushu obuphezulu, Yenziwe ngeentlobo ezahlukeneyo zemicu, ezinje ngefayibha yeglasi kunye nefayibha ye-aramid, iimveliso zinokumelana ngokugqwesileyo kubushushu obuphezulu, ukungabikho kokuzinza kunye nokuzinza okubonakalayo, isetyenziswa ngokubanzi kuqhushumlilo igesi, ikoyile yeziko kunye neminye imisebenzi yokususa uthuli. Imodeli yeMveliso RQ-MT-800 Ifayibha yeZinto zePhepha lePolyester eliQhelekileyo leStrim Fibre yeglasi yokuTyeba mm ≥2.1 Iyunithi Ubunzima g / m2 ≥750 yomoya Permeabili ...
Isihluzi se-Antistatic saziva Emva kokufikelela kwinqanaba elithile (oko kukuthi, umda wokuqhushumba), uthuli oluvela kwimizi-mveliso ngokubanzi lunokukhokelela kuqhushumbo nomlilo kwimeko yokukhutshwa kombane okanye ucinezelo lwangaphandle. Ngokweemfuno zokuqhushumba komlilo ekhaya igesi yokuqokelela uthuli lwamalahle kunye nesamente yokuqokelela uthuli lwamalahle kunye namanye amashishini, isixhobo sokucoca inaliti esineenaliti esivaliweyo kunye nelaphu lokucoca zaphuhliswa kwaye zaveliswa. Ukongeza kwinkqubo yokuvelisa inaliti eqhelekileyo yaziva, iphe ...
Isihluzo se-polypropylene saziva
Icebo lokucoca ulwandle lwe-olypropylene laziva ngathi inkampani yethu ivelisa ifayibha ephezulu yeplypropylene yokwenza i-polypropylene inaliti yokucoca ulwelo. Ngaphandle kwezibonelelo zokucoca ulwelo oluhlatyiweyo ngenaliti, i-polypropylene inokumelana ne-asidi engcono, i-alkalinity kunye nendawo yokuthambisa esezantsi kune-polyester fiber, ke inaliti ye-polypropylene yaziva isetyenziswa ngokubanzi kubushushu begesi engaphantsi kwe-100 ℃ kunye ne-asidi ephezulu kunye nealkalinity, okanye ulwelo- ifildi yokuzahlula eqinileyo ene-asidi ephezulu kunye nealkalinity.Kwintsimi ye-liquid-solid sep ...
Isihluzi se-acrylic saziva
Ifayibha ye-acrylic esetyenziswe kwishishini lokucoca ulwelo ngokubanzi libhekisa kwihomopolymer acrylic. I-acrylic, (ifayibha ye-acrylic) ifayibha yenziwe ngu-DuPont ngo-1950. Ineround okanye i-octagonal, umphezulu ugudile, akukho lula ukufunxa amanzi, inokumelana ne-asidi kunye nealkali kunye nelanga, kwaye akukho lula ukuba tyheli kunye nebala. Ihlala ibizwa ngokuba yi-polyacrylonitrile fiber. Ifayibha ye-acrylic ngokwayo amandla e-fiber ayongaphezulu kakhulu, ngokubanzi kusetyenziswa ilaphu le-polyester filament okanye i-acrylic kunye ne-polyester m ...